कोरोना संक्रमित भेटिएको क्वारेन्टाइनमा पिपिईबिनै खटिएकी नर्स भन्छिन्, ‘भगवान पुकार्छु, केही नहोस्’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत २७ गते ११:१४
धनगढीको कभर्डहलमा मिना राना मलिन अनुहार लिएर उपचारमा खटिरहेकी छिन्।
क्वारेन्टाइनमा रहेका मान्छेहरूको उस्तै फुङ्ग उडेको चेहरा देख्छिन्।
केही दिन पहिले एउटा बेडमा त नजर पुग्यो कि आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो।
किनकि, त्यो बेडमा रहेकी एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
त्यही भएर पनि उनी घरिघरि भगवान पुकार्छिन्- केही नहोस्।
पेसाले नर्स भएकाले उनले दैनिक १२ घन्टा डिउटी गर्नैपर्छ। यही क्वारेन्टाइनमा डिउटीमा खटिँदा सरकारले लकडाउनको समय दुई पटक थपिसक्यो। अझै कतिपटक थपिने हो टुंगो छैन।
धनगढीको कबर्ड हलमा तयार पारिएको क्वारेन्टाइनमा खटाइएको भन्दै उनलाई फागुन ११ स्वास्थ्य कार्यालयबाट फोन आएको थियो।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको खिमडी हेल्थपोस्टमा कार्यरत् उनी होली मनाउन धनगढीस्थित घर आएकै बखत यतै रोकिएकी छिन्।
एक्कासि क्वारेन्टाइनमा खटाइएको फोन आउँदा आवश्यक चिकित्सकीय सामग्रीको प्रबन्ध कस्तो छ भनी सोधेकी थिइन्। त्यसरी सोध्नुको डर थियो, ‘कतै सामग्रीबिनै जोखिमपूर्वक उपचारमा संलग्नपो हुनुपर्ने हो कि?’
स्वास्थ्य कार्यालयबाट सबै सामग्रीको उपयुक्त प्रबन्ध रहेको उत्तर पाए पनि कार्यक्षेत्र नपुग्दासम्म मीना ढुक्क थिइनन्।
उनलाई जुन कुराको डर थियो- कार्यक्षेत्र पुग्दा भइदियो त्यही।
उनी लगायत आठ जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली कबर्ड हलको क्वारेन्टाइमा राखिएका शंकास्पद व्यक्तिको रेखदेखमा छन्। तर, उनीहरूले पिपिई लगायत आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री पाउन सकेका छैनन्।
उनले अहिलेसम्म दुई पटक मात्र पिपिई पाएको बताउँछिन्। ‘सर्जिकल मास्क र ग्लब्सको भारमा हामी क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको रेखदेख गरिरहेका छौं। सिधा सम्पर्कमा जानुपर्छ। उपचारमा खटिन निकै जोखिम छ,’ उनले भनिन्।
क्वारेन्टाइनमा रहेका सात जना कैलाली र कञ्चनपुरका हुन्। उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहे पनि अनेक शंका र उपशंकाले मीराको मनमा बेचैनी दौडिरहन्छ।
उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेकी ३४ वर्षीया महिलामा यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यहाँ उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरू त्रसित छन्। अर्कोतर्फ पिपिई लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नै प्रमुख भएको उनी बताउँछिन्।
विश्व कोरोनाको डरमा रहेको बेला मीरा क्वारेन्टाइनमा खटिनु पर्ने भएपछि घरका मान्छे डराएका थिए।
‘मैले त सबै कुरा बुझेकी थिएँ। स्वास्थ्य अधिकृतसँग कुरा गर्दा हाम्रा लागि चिकित्सकीय सामग्रीको राम्रै व्यवस्था छ भन्नुभएको छ भन्दै परिवारलाई आश्वस्त पारेँ। तर, यहाँ जोखिममा रहेको कुरा कसलाई सुनाउनु?,’ उनले भनिन्, ‘यसविरूद्ध हामीले जसरी पनि लड्नु त छँदैछ। तर, हाम्रा लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर मनोबल बढाउने कार्य भने सरकारले गरिदिनुपर्छ।’
उनले कमजोर मानसिकता बोकेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्न नसकिने बताइन्।
संक्रमितको संख्या न्यून नै देखिए पनि नेपाल कोरोना भाइरसको जोखिमयुक्त छ। सकारले चैत ११ गतेदेखि सरकारले जारी गरेको लकडाउन अहिले पनि कायमै छ।
लकडाउन सुरू भएसँगै नेपालमा बाहिरबाट आएका मान्छेमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थाल्यो। अहिले देशभर नौ जना संक्रमित फेला परेका छन्।
तीमध्ये चार जना सुदूरपश्चिममा भेटिए। यसकारण पनि सरकारको ध्यान सुदूरपश्चिममा केन्द्रित भएको छ।
त्यहाँ भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रिएका छन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण भएका छन्। तर, तयारीबिनै चिकित्सक खटाइएको छ। चिकित्सकका लागि अत्यावश्यक सामग्री पर्याप्त छन्, न कुनै प्रशिक्षण नै छ।
कोरोनलाई परास्त गर्न विश्वभरिका चिकित्सकहरू सैनिक बनेर उभिइरहेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा नेपालका चिकित्सकहरू पनि अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिहेको बताइन्।
‘तर, नेपालमा चिकित्सकका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका बाबजुद पनि चिकित्सकहरू दत्तचित्तका साथ काम गरिरहेका छन्।’
समाचार तयार पार्दासम्म मीना खटिएको क्वारेन्टाइनमा रहेकामध्ये दुई जनाको मात्र स्वाव परीक्षण गरिएको छ। उनीहरूको रिपोर्ट पनि आइनसकेको मीनाले बताइन्।
आफूहरूले जनस्वास्थ्य र आपूर्ति कार्यालय लगायतका सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सामग्रीको लागि माग गर्ने गरेको भए पनि पाउन नसकेको गुनासो उनले गरिन्। जनस्वास्थ्यले एक पटक उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि नपाएको उनले बताइन्।
‘क्वारेन्टाइनको गाइडलाइनमा पिपिई पर्दैन भन्दै हामीलाई दिन हिच्किचाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा पहिले बस्ने ठाउँ यही हो। हामीले उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो यस्तो दुःख कसले बुझ्ने?’
‘सेवा गर्नु हामीहरूको धर्म हो। यस्तो बेला थप जिम्मेवार बनेर सेवा गर्नुपर्छ। त्यसैले, हामी अहिले दिनहुँ १२/१२ घण्टा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्सकहरू नै सुरक्षित नरहे देशमा थप जटिल स्थिति हुन्छ। त्यसैले सरोकारवाला निकायले बुझेर हामीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’
One thought on “कोरोना संक्रमित भेटिएको क्वारेन्टाइनमा पिपिईबिनै खटिएकी नर्स भन्छिन्, ‘भगवान पुकार्छु, केही नहोस्’”
अधिवक्ता गणेश कडायत says:
संसारमा द्रुतगतिमा फैलिइरहेको कोरोना रोगसँगको लडाईंको अग्रमोर्चामा खटिने मिना बहिनिजस्ता धेरै नर्सहरुले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएका छन् । यस्ता राष्ट्रसेवकहरुलाई PPE जस्ता हातहतियार नदिई निहत्था कोरोना बिरुद्धको युद्धमा पठाउनु बिडम्बना हो । समाचारमा धेरै थान PPE आएको भन्ने सुनिन्छ तर, जो ब्यक्ती सिधै संक्रमितसंग नजिकै भएर सेवा प्रदान गरिरहेको छ त्यस्ता नर्स, डाक्टर, सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्स चालकहरुलाई उपलब्ध नगराई वाँहाहरुको ज्यान जोखिममा हाल्नु हो । यसरी असुरक्षित भएरपनी निरन्तर सेवामा खटिरहने मिना बहिनिहरुजस्ता राष्ट्रसेवकहरुलाई हृदयदेखि नै सलाम छ । अझै अहिले विभिन्न संचार माध्यममा प्रहरी कर्मचारीहरुको तलब काटिने कुरा आएको छ, अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा तलब काट्ने होईन बरु थपेर दिनुपर्नेमा त्यसको ठिक बिपरित काम हुँदै आएको छ । यस्ता कुराहरुमा सरकार र सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस्, सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने जोखिमपूर्ण कार्यहरु तत्काल बन्द गरि सबैले सम्वेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ !!! आफुमात्रै बाँच्ने होईन अरुलाई पनि बचाउँ, “स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मिको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउँ, वाँहाहरु नै नभए हामी नेपालिको उचित उपचार र सुरक्षा कसले गरिदिने हो ? यसबारेमा पनि ध्यान दिउँ ।”